Amazon Europe मा बिक्री गर्दै - E-Export Propars
प्रबन्ध संग अमेजन यूरोप स्टोरहरु सजीलो छ!
एक बटन को क्लिक संग अमेजन यूरोप मा5देशहरु मा तपाइँको उत्पादनहरु बेच्न शुरू गर्नुहोस्!
Propars Amazon आधिकारिक सेवा प्रदायक हो।
यो Propars संग अमेजन युरोप मा बेच्न सजिलो छ!
तपाइँ एक एकल क्लिक संग अमेजन यूरोप मा Propars मा जोड्ने उत्पादनहरु बेच्न सक्नुहुन्छ।
अमेजन यूरोप बाट आदेशहरु अन्य सबै आदेशहरु संग एकै पर्दा मा एकत्र गरीन्छ।
अमेजनमा पसल खोलेपछि मानिसहरू किन मबाट किन्छन्?
"अमेजन मा एक बिक्री मा मनपर्ने
यो अमेजनको ब्रान्ड विश्वसनीयता हो, तपाईंको स्टोर होइन।"
Propars ब्लग: मँ अमेजन मा १५ वस्तुहरु बेच्नु पर्छ?
तेसैले सुरु गरौं
२०२० को पहिलो आधामा विश्वव्यापी अमेजनमा सामेल हुनुहोस्
विक्रेताको संख्या 651.000। आज पनि 3.145, प्रति घण्टा 131,2विक्रेता प्रति मिनेट
मतलब। हालको औसत दरमा Amazon
१.१ मिलियन विक्रेताहरु वार्षिक रूपमा भाग लिन्छन्।
अमेजन युरोप मा बेच्दै
ई-निर्यात सुरु गर्नु र इन्टरनेट मार्फत संसारमा बेच्नु हाम्रो उमेरको नयाँ व्यावसायिक समझ हो। यस बिन्दुमा; Amazon ले युरोपमा बेच्न खोज्ने व्यवसायहरूलाई अनौठो अवसरहरू प्रदान गर्दछ। विश्वको सबैभन्दा ठूलो ई-कमर्स प्लेटफर्म, Amazon, युरोपेली ई-वाणिज्य बजारको नेता पनि हो।
यसबाहेक, यो प्रक्रिया हरेक सन्दर्भमा अत्यन्तै सजिलो छ, कसैले सोच्न सक्ने विपरीत। टर्कीमा तपाइँको कर दर्ता संग, तपाइँ अमेजन युरोप मा एक स्टोर खोल्न सक्नुहुन्छ र अमेजन युरोप मा स्थित सबै देशहरुमा एकल खाता मार्फत बेच्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले भुक्तानी सेवा र कार्गो जस्ता क्षेत्रहरूमा उन्नत प्रणालीहरूबाट लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ।
700+ मिलियन सम्भावित ग्राहकहरू र लाभदायक विनिमय दरहरू
E-वाणिज्य 700 मिलियन भन्दा बढी मानिसहरूको कुल जनसंख्या भएको युरोपमा सबैको जीवनको एक हिस्सा हो। यसबाहेक, सीमापार किनमेल गर्ने प्रवृत्ति पनि धेरै उच्च छ। आज, अमेजन युरोपमा स्टोर भएको व्यवसायसँग सम्पूर्ण युरोपमा बेच्ने अवसर छ। यसबाहेक, तपाईं यूरो र स्टर्लिंग विनिमय दरहरूमा आफ्नो बिक्री गरेर आफ्नो नाफा बढाउन सक्नुहुन्छ। विदेशी विनिमय दरहरु मा आफ्नो बिक्री संग अधिक ग्राहकहरु र अधिक लाभदायक बिक्री दुवै महसुस!
Propars संग Amazon Europe मा बेच्न सुरु गर्नुहोस्
प्रोपार्सको अमेजन एकीकरणको साथ युरोपमा ई-निर्यात अब धेरै सजिलो छ! यहाँ Propars प्रयोग गर्ने केही फाइदाहरू छन्;
तपाईंले प्रोपार्स प्यानलमा स्थानान्तरण गर्नुभएका उत्पादनहरू थोकमा, सम्पूर्ण युरोपभरि एक क्लिकमा बेच्न सक्नुहुन्छ।
तपाईंले टर्कीमा बचत गर्नुभएका उत्पादनहरू तपाईंले बेच्न लाग्नु भएको देशको भाषामा स्वचालित रूपमा अनुवाद हुन्छन्।
प्रोपर्स प्रणालीमा स्टकहरू स्वचालित रूपमा ट्र्याक गरिन्छ। जब तपाइँ बिक्री गर्नुहुन्छ, तपाइँको स्टोरहरूमा तपाइँको स्टकहरू स्वचालित रूपमा अपडेट हुन्छन्।
तपाईं आफ्नो अन्य स्टोरहरू जस्तै स्क्रिनमा सम्पूर्ण युरोपबाट आफ्ना अर्डरहरू हेर्न र व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईंले आधारभूत विज्ञापन सेटिङहरूको लागि प्रोपार्स टोलीबाट समर्थन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ जसले बिक्री प्रक्रियालाई गति दिनेछ।
Propars को साथमा, तपाइँ तपाइँको अन्तर्राष्ट्रिय ढुवानी को लागी सबै भन्दा उपयुक्त शिपिंग विकल्प छनोट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाइँ FBA प्रणाली प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाइँ यस सम्बन्धमा नि: शुल्क समर्थन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
अमेजन यूरोप फ्री स्टोर सेटअप
यदि तपाईंले अमेजन युरोपमा बेच्ने निर्णय गर्नुभएको छ तर कसरी सुरु गर्ने थाहा छैन, चिन्ता नगर्नुहोस्! Propars टोलीले तपाइँको तर्फबाट तपाइँको कम्पनीको स्टोर सेटअप प्रक्रिया अन्त्य-देखि-अन्त व्यवस्थापन गर्दछ।
तपाईंले गर्नुपर्ने भनेको प्रोपर्स टोलीमा पुगेर अनुरोध गरिएका कागजातहरू तयार गर्नु हो। जब तपाईं बिक्रीको लागि तयारी गर्न जारी राख्नुहुन्छ, तपाईंको पसल तपाईंको तर्फबाट सक्रिय हुनेछ।
तपाईले हामीलाई तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ सम्पूर्ण युरोपमा बेच्न!